Breziliana Mpanao Graffiti sy Tanora Syriana Miara-Mandoko Ny Rindrin’ny Tobin’ny Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2017 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Ελληνικά, Français, عربي, Español, English
Sekoly nolokoina tao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Syriana ao amin'ny Lemaka Beqaa, Libanona. Sary avy amin'ny pejy Facebookn'i Rimon Guimarães.
Ahitana loko maro samihafa ankehitriny ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Syriana ao amin'ny Lemaka Beqaa ao Libanona, mampiantrano mpitsoa-ponenana efa ho 1 tapitrisa, noho ny tetikasa iray nahita ireo ankizy Syriana nampian'ny Breziliana mpanao graffitti antsoina hoe Cosmic Boys nandravaka ny sekoly tamin'ny zavakanto nolokoina ara-teknika.
Anisan'ny fisantarana andraikitra lehibe antsoina hoe Cosmic Future izay te-hampiasa ny zavakanto ho fitaovana manasitrana ho an'ny tanora Syriana ity tetikasa ity. Anisan'ireo mpandray anjara amin'izany ny Tetikasa Conexus, fiaraha-mientan'ny kanto mifindrafindra toerana; ny Al Caravan, izay mifofotra amin'ny atrikasa ara-panabeazana, ara-pialam-boly sy ara-kolontsaina ho an'ireo ankizy sy olon-dehibe Syriana nafindra toerana; ny Costmic Boys, ahitana an'i Rimon Guimarães sy Zéh Palito; i Sheilo Zago, mpanangon-drakitra; i Agathe Champsaur, Frantsay mpiandraikitra ny fandraketan-taratasy, ary i Anas Albraehe, mpanankato Syriana.
Ny hanangona 9.999 dolara Amerikana amin'ny alalan'ny fanentanana fanangonam-bola no tanjon'izy ireo, ary mizara ireo vaovao farany ao amin'ny Facebook sy Instagram mikasika ny fivoaran'ny asan'izy ireo.
Ireto ambany ireto ny antony mampandrisika azy ireo:
Amin'ny fotoanan'ny fahabetsahan'ny fifindra-monina noho ny ady iraisam-pirenena, mitady fomba hivelomana, toerana honenana indray ny olona – hiandry na hanomboka fiainana vaovao tanteraka. Maro ireo miafara amin'ny fiainana anatin'ny fepetra ratsy ao anatin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana sy ny toeram-ponenana, izay tsy mora ny miditra mianatra ary matetika miala amin'ny fianarana ny ankizy sy ny tanora.
Mihevitra izahay fa mitondra fanamaivamaivanana, vinavina sy fahaizana ho azy ireo ny zavakanto mba hahatonga ny fanantenan'izy ireo tsy havesatra bataina, ary ny hanome feo ho azy koa ireo sehatra hanehoany ny zava-iainan'izy ireo, sy ho hitan'ny iraisam-pirenena. Noho izany, ny tanjonay dia ny mampandray anjara ireo ankizy sy tanora mpitsoa-ponenana monina amin'ireo toerana ireo, miezaka manova ny fanantenan'izy ireo amin'ny fiainana ho amin'ny ho avy mamirapiratra kokoa!
Zeh Palito (eo anoloana), Rimon Guimarães (afovoany) ary i Khaldoun Al Batal (ery amin'ny farany). Avy amin'ny pejy Facebook-n'ny Tetikasa Conexus.
Mitondra ny zavakanto sy ireo ezaka fampianarana hafa ho an'ireo Syriana nafindra toerana nanomboka tamin'ny taona 2013 ny Al Caravan. Teraka herintaona talohan'izany ny hevitra ho fandaminana, raha nidaroka baomba manerana ny faritra Idlib, ao avaratra andrefan'i Syria, nandritra ny andro mazava ny tafika an'habakabaky ny fitondrana, ka voatery nitsoaka ny tranony nandritra ny fotoana vetivety ny mponina .
Khaldoun Al Batal, mpiara-manorina ny Al Caravan, nilaza tamin'ny Global Voices ny tantara iray manontolo:
Mpinamana roa izahay izay nahatsapa fa afaka mamerina ny entan'ny olona amin'ny laoniny ny toerana ifindrafindràna raha mbola lavitry ny tranony izy ireo, tsara indrindra ny karavana izay nozaraina tsara tamin'izany faritra izany ho an'ny tetikasa ara-pambolena madinika. Nangataka tamin'ny mpamokatra iray izy ireo mba hanamboatra “Karavana Majika” manokana ho an'ny ankizy. Tapaka ny fiarahamiasanay raha maty tamin'ny fanafihan'ny tafika Syriana ny namako, saingy nisisika hanohy ny tetikasa aho.
Tamin'ny volana May 2013, nanokan-tena handeha teny amin'ny faritra lavitra ny Al Caravan mba hanome fampianarana fototra, fanabeazana sy fialam-boly ho an'ny ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana. Tsy solon'ny sekoly akory izany fa karazana fanamafisana ny firaisamonim-pirenena. Nitombo 15 ny ekipa mikarakara tovolahy sy tovovavy miisa 1500 any ho any ao amin'ny faritra ambanivohitra Syriana telo, dia i Idlib, Aleppo ary Latakia. Amin'izao fotoana izao, manao zavatra ao amin'ny faritra maro ao Syria sy ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Torkia, Jordania, Libanona ary Alemaina ny Al Caravan.
Na dia eo aza ny fananana famatsiam-bola voafetra, nahangona ekipa mpilatsaka an-tsitrapo teo amin'ny 100 teo tao anatiny sy ivelan'i Syria sy mpikatroka avy amin'ny seha-pampianarana ny Al Caravan mba hanome ny traikefan'izy ireo sy hiasa ho an'ireo ankizy Syriana ary hampiasa media sosialy hifandraisana amin'ny any ivelany.
Ny tanjon'ny tetikasa dia ny hanangana taranaka mankafy zavakanto ho ampahany manan-danja amin'ny famolavolana ny toetran'ankizy ho lavitry ny herisetra ary koa manome fanohanana ara-tsaina.
Naranty tao Paris sy Montreal ny asan'ireo ankizy eo amin'ny 3.000 eo izay mandray anjara amin'izany hosodoko izany, ao anatin'ny drafitra hanofana ankizilahy sy ny ankizivavy miisa 25 mba hanolotra fampisehoana momba ny zon'ny ankizy ao amin'ny Firenena Mikambana miaraka amin'ny feo tokana sy hira nentin-drazana maro.
Tamin'ny lahatsoratra vao haingana tao amin'ny Facebook, nilaza ny fitsidihan'izy ireo tao Damaskosy, Syria mba handoko rindrin'ny fanantenana bebe kokoa i Zeh:
Andro faha-4 tao Syria: Tao anatin'ny ady no nanombohanay nandoko ny rindrinay tao afovoan'ny renivohi-pirenena. Andro lehibe indrindra teo amin'ny fiainako noho ny zava-dehibe asehoan'ity rindrina ity sy ny toe-javatra rehetra atrehan'ity firenena ity. Graffitti nataon'ireo tanora no niteraka ny fiatombohan'ny ady tao amin'ny firenena tamin'ny taona 2011. Ankehitriny, taona 2017, mandoko rindrina eto izahay mba hanaparitaka fitiavana sy fanantenana amin'ny alalan'ny zavakanto.
Raha mahavita manatanteraka ny andraikitray handoko ity rindrindra ity tsy misy olana izahay, dia ity rindrina ity no hosodoko an-drindrina lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Zavatra izay manome risim-po lehibe ho anay sy manome hery hanohy anay handoko ao anatin'ny loza mety atrehinay sy ny zava-tsarotra atrehinay eto izany. Antsipirihany vitsy: Tonga tao amin'ny firenena tamin'ny alalan'ny fiara mifono vy izahay ary mandoko odidinin'ireo lehilahy mitam-piadiana.
Tia mandray olona ny Syriana amin'ny ankapobeny, tena tia namana ary matetika mandray anay amin'ny fomba tsara indrindra izay azo atao. Eny an-dalambe, miaramila mitam-piadiana marobe, andiam-piara sy olona eny amin'ny lalana rehetra sy toerana stratejika maromaro no mameno tanàna. Feom-baomba, fiaramanidina, tifitra mandritra ny andro mazava izay mihamafy amin'ny alilna. Mino aho fa afaka “manavaka” ny feon'ny ady mitranga 6 kilometatra miala ny misy anay izahay. Eny rehetra eny ny ady saingy eo koa ny fifaliana. Zavatra sarotra hazavaina izany.
Mahafinaritra ny tanàna fahiny ary feno tantara, tsena, mari-trano, sakafo, izay miavaka daholo. Tsara tarehy ny olona ary be fitiavana na dia eo aza ny alahelo [nenina].
Nanao kabary ampabibemaso ankehitriny ny Sekreteran'ny Kolontsaina ao amin'ny firenena, nilaza fa mitondra “basy” izahay… mitondra fanantenana ny borosinay.
Sekoly nolokoina tao amin'ny Lemaka Beqaa . Avy amin'ny pejy Facebook-ny tetikasa Conexus